आईट्यून्समा "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री मेटाउने हो? | आईफोन समाचार
ITunes मा "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री कसरी हटाउने?
जबसम्म एप्पलले GB२ जीबी आईफोन, आईप्याड वा आईपड बेस मोडेलको रूपमा प्रस्ताव गर्दैन, यी प्रकारका जिज्ञासाहरू सामान्य हुनेछन्। १GB जीबी उपकरण भएको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो भण्डारणको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने बारे सँधै विचार गर्नुपर्नेछ र आईट्यून्सको "अन्य" सेक्सनमा धेरै ठाउँ छ भनेर देखाउँदा सबै अलार्महरू बन्द हुनेछन्। GB२ जीबी वा GB 32 जीबी उपकरणमा १ जीबी स्वीकार्य छ, तर १GB जीबी उपकरणमा यो भिडियो रेकर्ड गर्न, संगीत बचत गर्न वा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। यो लेखमा हामी यो के हो र यो कसरी गर्ने बारे कुरा गर्नेछौं "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री मेट्नुहोस् iTunes.
1 «अन्य» मा के समावेश छ
2 ITunes मा "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री कसरी हटाउने
2.1 स्वचालित सिnc्क बाकस अनचेक गर्नुहोस्
2.2 क्यासहरू हटाउँदै
2.3 अर्को पुन: गणना गणना गर्दै
«अन्य» मा के समावेश छ
ITunes को "अन्य" सेक्सनमा सम्पर्कहरू, सन्देशहरू, MMS र अन्य प्रकारहरू समावेश छन् अनुप्रयोग क्यास। त्यहाँ डाटा पनि छ जुन आईट्यून्सले कुनै पनि कारणको लागि पहिचान गर्न सक्दैन।
ITunes मा "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री कसरी हटाउने
स्वचालित सिnc्क बाकस अनचेक गर्नुहोस्
यो साधारण इशाराले सम्भवत केहि स्थानहरु लाई पुनः प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ जुन "अन्य" मा अवस्थित छ। यसले कार्य गर्न सक्दछ किनकि यसले आइट्युनहरू बल गर्दछ ठाउँ पुन: गणना गर्नुहोस् प्रत्येक चोटि हामी कम्प्युटरमा हाम्रो उपकरण जडान। हामी निम्न कार्य गर्दछौं:
हामी कम्प्यूटरमा आईफोन, आईपड वा आईप्याड जडान गर्दछौं।
हामी आईट्यून्स खोल्छौं।
हामी माथि बायाँपट्टि हाम्रो उपकरण चयन गर्दछौं।
हामी सारांश छनौट गर्दछौं।
बक्स अनचेक गर्नुहोस् "यो आईफोन जडान गर्दा स्वचालित रूपमा सिnch्क्रोनाइज गर्नुहोस्।"
यदि तपाईं अधिक ठाउँ मेटाउन चाहानुहुन्छ भने, हामी गर्न सक्ने अर्को कुरा हो अनुप्रयोग क्यास खाली गर्नुहोस्। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलिग्राम, इत्यादि फोटो, भिडियो र अन्य प्रकारका कागजातहरू भण्डार गर्न सक्दछ जसले धेरै ठाउँ लिन सक्दछ। उदाहरणका लागि, टेलिग्रामसँग हरेक हप्ता क्यास खाली गर्ने विकल्प छ र यद्यपि मसँग धेरैजसो गिगहरू व्यस्त हुन्छन्।
क्याचहरू हटाउने नकारात्मक पक्ष भनेको यो एक कठिन प्रक्रिया हो र यस्तो सम्भावना छ कि हामी केही मेटौं जुन वास्तवमै धेरै ठाउँ लिइरहेको छैन।
अर्को पुन: गणना गणना गर्दै
अर्को सम्भावना पनि छ, तर यो हामीले अघिल्लो दुई विधिहरू प्रयास गरे पछि गर्नु पर्ने अन्तिम चीज हो। हामी निम्न गर्छौं:
हामी आईफोन, आईपड वा आईप्याड जडानको साथ खोल्यौं
एप्लिकेसनहरू बाहेक हामी सि sy्क्रोनाइज गर्न चाहेको सबै चीजहरू अनचेक गर्छौं।
हामी परिवर्तन लागू गर्दछौं।
हामी पुन: चिन्ह लगाउँदछौं जुन हामी समक्रमण गर्न चाहन्छौं।
हामी फेरी परिवर्तनहरू लागू गर्दछौं।
यदि हामीले तीन अघिल्ला विधिहरू गरेमा, हामी सबै वा लगभग सबै सामग्री आईट्यून्समा "अन्य" मेटाउनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » ITunes मा "अन्य" को रूपमा देखा पर्ने सामग्री कसरी हटाउने?
धेरै राम्रो, "तपाईले अनुप्रयोग क्यास मेटाउन सक्नुहुन्छ" किनकि तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ कि आईओएस .8.3..XNUMX ले तपाईले पीसीबाट फाइलहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले सजिलै आईफुनबक्सको साथ क्याचहरू हटाउन सक्नु अघि। मलाई फ्लीपबोर्ड मात्र थाहा छ जुन तपाईंलाई म्यानुअल तरीकाले गर्न दिन्छ।
कत्ति राम्रो आईक्यानर आउँदै थियो ...
त्यहाँ म्याक वा विनका लागि कुनै अनुप्रयोग छैन जुन यो प्रकार्य गर्दछ?
सफलताको लागि भन्यो
अन्य फोल्डरहरूमा त्यहाँ आइक्लोउड फोटो पुस्तकालयको क्यास पनि छ, र VLC, पृष्ठहरू, कीनोट, नम्बरहरू, एक्सेल, शब्द, एडोब एक्रोब्याट र अन्यहरू जस्ता अनुप्रयोगहरू बिर्सन नहुनुहोस् जुन तपाईं आईट्यून्सबाट फाइलहरू थप्न सक्नुहुन्छ, ती फाईलहरू पनि हिस्सा हुन् «अन्य» को
एलेक्सिटोलाई जवाफ दिनुहोस्
एउटा प्रश्न? तपाईं फे फेसबुक अनुप्रयोगको क्याच कसरी मेटाउनुहुन्छ?
मैले कहिले पनि थाहा पाइन कि कसरी, म सँधै अनुप्रयोग मेटाउँछु र यसलाई पुन: स्थापना गर्दछु! मैले फोनफोनियन तर स्याउ प्रयोग गर्नु अघि ... तपाईंलाई थाहा छ यो के भयो!
धेरै राम्रो पाब्लो, साझेदारीको लागि धन्यवाद।
DaCumaKu लाई जवाफ दिनुहोस्
रिपोर्टले कम सहयोग गर्दछ। यो वा त्यो अनुप्रयोगको क्यास खाली गर्नुहोस्। तर तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ? यदि हामी मध्ये धेरैजसोलाई थाहा छ कि हामीसँग ठाउँ समस्या हुँदैन र पक्कै हो भने, हामीले यो लेख पढेका थिएनौं।
नमस्कार, scl जैसा तपाई बुझ्नुहुन्छ, म भन्न सक्दिन कि कसरी सबै अनुप्रयोगहरूको क्यास खाली गरियो। हजारौं छन्। सयौं हजारौं। यदि तिनीहरूसँग विकल्प छ भने, यो सेटि forहरूको लागि हुनुपर्दछ। उदाहरणको लागि, टेलिग्राममा, तपाईं च्याट मेटाउन स्लाइड गर्नुहुन्छ र यसले तपाईंलाई क्यास मात्र मेटाउन चाहान्छ भनेर बताउँछ, तर ट्वीटबटमा यो फरक छ, किनकि यो प्रत्येक ट्विटर खाताको सेटिंग्समा हुन्छ। तपाईंले त्यो बुझ्नु पर्छ।
थप्नुहोस् यदि तपाईंसँग जेलब्रेक छ भने त्यस्ता अनुप्रयोगहरू छन् जुन स्वचालित रूपमा आइसनेर वा २pp पीपी अनुप्रयोग जस्तै क्यास खाली गर्दछ जुन एक सुपर छिटो र प्रभावकारी क्यास क्लीनर EYE छ जेलब्रेक भएको अवस्थामा
सिरीलाई जवाफ दिनुहोस्